Laptọọpụ kacha mma maka mmemme nke 2022, nke ị ga-ahọrọ?
Ịrụ ọrụ mmemme na-aghọwanye ohere ọrụ dị mma. Ọtụtụ n'ime ọdịnaya anyị na-eri, ma ọ bụ maka ntụrụndụ ma ọ bụ maka ọrụ, dị site na ụdị ngwanrọ ụfọdụ, na ngwanro sitere na mmemme mepụtara. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ime ya na kọmputa desktọọpụ, ma ọ bụ ọbụna mbadamba (agaghị m akwado ya), echere m na nhọrọ kacha mma bụ ime ya na a. obere ka mmemme nke anyị nwere ike iji ebe ọ bụla.
Ịhọrọ ezigbo laptọọpụ na mmemme nwere ike ịbụ ọrụ dị mfe. N'akụkụ ụfọdụ, ọ dị ka ịhọrọ laptọọpụ ọ bụla ọzọ mana, dịkwa ka mgbe anyị gara ịzụrụ kọmputa ọzọ, anyị ga-emerịrị ya jide n'aka na ị na-ebuli ihe ndị dị mkpa ka anyị wee jiri ya mee ihe maka ebumnuche anyị. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma ma ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụrụ laptọọpụ na mmemme.
1 Laptọọpụ kacha mma maka mmemme
1.2 Dell XPS 13 9370 Akwụkwọ ndetu
1.5 Akwụkwọ Microsoft dị n'elu 3
2 Atụmatụ nke laptọọpụ maka mmemme
2.2 nkasi obi ahụigodo
2.3 Ebe nchekwa RAM
2.6 Nkwụsi ike
Laptọọpụ kacha mma maka mmemme
Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị otu kwesịrị ekwesị, Apple bụ nzọ dị mma. MacBook Pro gị nwere a 13 ″ Ngosipụta retina nke ahụ na-enye anyị ihe oyiyi na-enweghị atụ n'okpuru ọnọdụ ọ bụla na n'agbanyeghị ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya anyị chọrọ ịhụ na ya. N'aka nke ọzọ, ọ na-enye anyị ihe dị iche iche ruo awa 10, nke dị oke egwu ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ọ bụ otu na-enye ọrụ dị mma.
N'ime, MacBook Pro gụnyere ihe nrụpụta Apple M1 nke ugbu a bụ ihe kachasị mma maka ụdị ọrụ ọ bụla, gụnyere mmemme. Ha 8GB Ram na 256GB SSD draịvụ ike na ụdị ya kachasị, yana sistemụ arụmọrụ macOS, na-emesi anyị obi ike na ihe niile anyị na-eme anyị ga-eme n'ụzọ dị nro, kwụsie ike na, gịnị kpatara na ị gaghị ekwu ya, na-eji ọmarịcha anya.
N'ezie, ezigbo laptọọpụ sitere na ụdị dị otú a nwere ọnụ ahịa, ọ bụghịkwa nke dị ala: anyị nwere ike nweta ya ihe dị ka € 1350.
Dell XPS 13 9370 Akwụkwọ ndetu
Laptọọpụ Dell a bụ nnukwu kọmpụta, mana ọ bụghị n'ihi nha ya, mana n'ihi arụmọrụ ya. Ihuenyo 13.3-inch na-enye mkpebi nke 1920 × 1080 pikselụ, nke a na-atụ aro ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ na-ekiri ọdịnaya ndị ọzọ. Ya mere, ọ bụghị nnukwu kọmputa ma, ọ bụ n'ihi ibu ya, ebe ọ bụ na naanị 1.2kg dị arọ. N'aka nke ọzọ, ọ na-enye nnukwu nnwere onwe, ruo awa 8 iji.
N'ime, laptọọpụ a nwere ole na ole 8GB Ram na diski SSD nke ga-ahụ na anyị nwere ike inwe ọtụtụ usoro mepere emepe na-enweghị sistemụ arụmọrụ, Windows 10 na kọmpụta a, na-ata ahụhụ nke ukwuu.
Mana ezigbo teknụzụ anaghị adị ọnụ ala ma nwee ike rụpụta kọmpụta a dị gịrịgịrị ma dị mfe, ha etinyela nnukwu ego na R&D, nke pụtara na ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ya, anyị ga-akwụ ụgwọ. ihe karịrị 1400 €.
A na-atụle ASUS Rog Zephyrus G dị ka laptọọpụ egwuregwu, nke na-apụtakarị na ọ gụnyere ihe ndị dị elu. N'okwu a, anyị nwere kọmputa 14 nke anụ ọhịa ahụ Full HD ihuenyo nke anyị ga-ahụ ihe niile dị mma. Mana uru nke kọmpụta a abụghị naanị na ihuenyo. Nke kacha mma bụ n'ime.
Asus a kwadoro site na ihe nhazi AMD Ryzen 7 nke na-eme ka Intel dakọtara ya karịa. N'aka nke ọzọ, ọ gụnyere ihe dịka 16GB nke RAM na draịvụ ike SSD (1TB na nke a) nke ga-eme ka ihe niile anyị na-eme ka anyị na-eme nke ọma.
Kọmputa ahụ na-abịa n'enweghị sistemụ arụmọrụ, nke na-enye aka na ọnụahịa ya dị ala karịa ka ị tụrụ anya ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo kọmputa iji mee ihe ma ọ bụ rụọ ọrụ ọ bụla ọzọ na-emefughị ​​nnukwu ego, ị nwere mmasị ileba anya na Huawei MateBook D 15. O nwere ihe niile, na ihe niile ọ gụnyere, nke na-abụghị obere. , ọ na-enye ya maka ọnụahịa si erughị than 600.
Maka mmalite, anyị na-ekwu maka kọmpụta 15.6-inch, nha ọkọlọtọ nke pụtakwara nnukwu. Iji gaa n'ihu, tinye ihe nhazi AMD Ryzen 5 nke na-eme ka ọ dịkwuo mma na Intel ya na nke ga-ahụ na ihe niile ga-emepe na ọsọ ọsọ karịa nke a na-anabata. Na ọsọ ahụ, draịvụ ike SSD ga-enyekwa aka, 256GB na nke a. A na-emecha ngwugwu nke isi ihe maka ịrụ ọrụ site na ihe dịka 8GB nke RAM nke ga-eme ka anyị nwee ike ịmeghe ọtụtụ usoro na-enweghị sistemụ arụmọrụ Windows na-ata ahụhụ nke ukwuu.
Ma mgbe anyị kwuru na o nwere ihe niile, anyị mere ya tumadi n'ihi na o nwekwara etinyere ngwa na ngwugwu dị ka ekweisi Freebuds 3, obere akpa azụ na òké ikuku nke ga-enyere anyị aka ịdị na-arụpụtakwu ihe ma ọ bụrụ na anyị ejighị akụkụ aka nke ọma. Zuru oke, nri? Ọ dị nwute na mkpọ a adịkwaghị ugbu a na-ere ha iche.
Akwụkwọ Microsoft dị n'elu 3
Igwe Microsoft's Surface bụ otu n'ime akụrụngwa kachasị mma anyị nwere ike ịzụta ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji sistemụ arụmọrụ Windows. Ha bụ kọmpụta nke ụlọ ọrụ na, kedu ka ọ ga-esi dị, ha na-eji sistemụ arụmọrụ Windows arụnyere na ndabara. Kedu ihe ọzọ, ọ bụ maka convertibles, nke pụtara na anyị nwere ike iji ha dị ka kọmpụta ma ọ bụ mbadamba ihe.
Akwụkwọ Microsoft Surface 3 ...
N'ime, ha 8GB RAM na draịvụ ike SSD, 256GB na nke a, ha ga-emesi anyị obi ike na anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ ọnọdụ, ma i5 processor, na-enweghị nhọrọ kachasị njọ, ga-eme ka anyị nwee obere ndidi mgbe, dịka ọmụmaatụ, imeghe ụfọdụ ngwa.
N'iburu n'uche na nke a bụ ihe na-agbanwe agbanwe yana na ọ bụ ngwaike Microsoft gọọmentị, ọnụahịa ahụ adịghị elu dịka o siri dị, mana ọ bụghị maka akpa niile.
Atụmatụ nke laptọọpụ maka mmemme
Ọ bụrụ na anyị ga-eji kọmputa na-arụ ọrụ, na mmemme nwere ike ịbụ na ọ bụ ọrụ, ọ bara uru ịṅa ntị na ihuenyo ya. Anyị ga-eji ọtụtụ awa n'ụbọchị na-ele ya anya, ya mere, ọ bara uru na ọ bụ ihuenyo nwere nkọwa dị mma ka anyị ghara ime ka anya anyị dị ọcha. Na mgbakwunye, mkpebi dị mma ga-enyekwara anyị ohere, na mgbakwunye na ịhụ ihe doro anya, ịhụ ọdịnaya ndị ọzọ na ihuenyo. Ya mere, a na-atụ aro ka anyị họrọ maka laptọọpụ nke ihuenyo ya dị Full HD, ya bụ, na mkpebi kacha nta nke 1920 × 1080 pikselụ.
Otu panel dị mma dịkwa mkpa. Mgbe ọ bụla o kwere omume, ọ kacha mma ịhụ onwe anyị ihe oyiyi nke ọ nwere ike igosi, ma ọ bụrụ na nke a abụghị ihe ga-ekwe omume, anyị ga-eburu n'uche na kacha nchapụta ọ nwere ike igosipụta (nits), nke mere na anyị bụ ndị na-ekpebi ole nchapụta anyị chọrọ ma ọ bụghị ihuenyo mediocre. Ọzọkwa, ihe ọzọ m ga-akwado bụ na laptọọpụ anyị ga-azụta nwere ihuenyo site n'aka onye na-emepụta ihe a ma ama n'ụwa; ọ bụrụ na anyị zụtara nke na-adịghị mma, ọ ga-abụ na enwere oghere ọkụ ma ọ bụ ọbụna akụkụ "ọkụ", nke nwere ike bụrụ nsogbu dabere na ọrụ anyị na-arụ.
Ihe jikọrọ ya na ihuenyo bụ enyo ndị ọzọ, ya bụ, na anyị nwere ike jikọọ laptọọpụ anyị na nlekota ndị ọzọ iji gosi ọrụ ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime unu nwere ike na-eche na ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme mgbe mmemme bụ ide ederede, ma nke a bụ nanị ọkara eziokwu. Anyị nwere ike dee "ederede" ndị a na ihe karịrị otu mpio, ọ bụghị ikwupụta na anyị nwere ike ịchọ ihe nlele ọzọ ka anyị wee nwee ike ịhụchalụ ọrụ anyị na-arụ.
nkasi obi ahụigodo
Na mbụ, ịnweghị ike mmemme na-edeghị akwụkwọ. Ya mere, otu n'ime ihe kachasị mkpa ma ọ bụ akụrụngwa anyị kwesịrị iburu n'uche bụ ahụigodo nke laptọọpụ. Onwe m, echere m na Nhazi ahụigodo ahụ dị mma bụ ihe gbasara onwe ya. Ndị egwuregwu na-amasị ahụigodo nwere igodo dị elu na nke siri ike, mana mmemme anaghị egwu. Maka m, ebe ọ bụ na m nwara keyboard na igodo dị ala, nkasi obi ahụ dị na keyboard nke igodo ya nwere opekempe njem ka anyị chọpụta na anyị emetụla ha, nke ga-agụnye ịhụ obere mkpọ na ụda; Agbalịrị m ụfọdụ ahụigodo dị jụụ ma dị gịrịgịrị nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka pịnye na mbadamba ihe, akwadoghị ya.
Dị ka oge niile, ụzọ kachasị mma isi họrọ ahụigodo ga-abụ ịnwale ya n'anụ ahụ, mana ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, m ga-ahọrọ kọmpụta sitere na akara ama ama ama. N'ezie, m ga-ajụ kọmputa ndị na-agụnye usoro igodo ọhụrụ nke na-ekwe anyị nkwa ọnwa ma na-eweta nsogbu n'ihi na ihe ọhụrụ emeghị ha, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na anyị anụworị akụkọ na e nwere ọdịda. Ihe dị mma karịa ka anyị maara nke na-enye arụmọrụ dị mma karịa ihe ọgbara ọhụrụ nke anyị enweghị ntụnyere ya.
Ebe nchekwa RAM
Na ụkpụrụ na na tiori, iji mmemme ọ dịghị mkpa ịrụ ọrụ na kọmputa nwere ọtụtụ ebe nchekwa RAM. Mana anyị amaralarị na tiori bụ otu ihe na omume bụ ihe ọzọ. Ọ bụrụ na anyị chere na iji dee, anyị ga-enwe 4GB nke RAM fọdụrụ, echere m na anyị ga-emehie ihe n'ihi na otu ebe nchekwa ahụ ga-akwagharịkwa sistemụ arụmọrụ. Na mgbakwunye na dị ka anyị kwurula n'isiokwu a. mmemme nwere ike ịbụ karịa ederede ederede dị larịị, ebe ọ bụ na o yikarịrị ka anyị kwesịrị ịhụchalụ ọdịnaya nke ngwa dị arọ dị arọ na, iji mee ka ihe ka njọ, mee ya na nlele mpụga.
Ihe akwadoro ma ọ bụrụ na anyị ga-azụta kọmpụta ọ bụla ka ọ rụọ ọrụ bụ na anyị na-amalite na-elele nhọrọ site na 8GB Ram. Ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ọrụ anyị bụ ide "ederede" ndị a, anyị ga-eme ya ngwa ngwa na nke ọma na anyị ga-achọpụta na ọ na-ata ahụhụ ntakịrị ma ọ bụrụ na anyị na-arụkwa ọrụ ndị na-edezi (vidiyo na egwu), ihe anyị nwere ike ịbụ. adịghị mkpa. Anyị na naanị anyị maara ọrụ anyị ga-arụ ma ọ bụrụ na anyị ga-achọ ihe karịrị 8GB nke RAM.
Mbanye ike nke laptọọpụ na mmemme ekwesịghị ịbụ otu n'ime isi ihe na-eme ka anyị họrọ otu ụdị ma ọ bụ ọzọ, mana ihe dị mkpa ga-akọwarịrị: SSD draịva ha na-enye ọsọ ọgụgụ / ide ihe dị elu karịa nke diski HDD. Nke a pụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na-eme ga-eme ngwa ngwa, karịsịa mmemme mmeghe (ọ bụ ezie na processor nwekwara ihe ọ ga-ekwu maka nke a) ma ọ bụ nnukwu faịlụ.
Obi abụọ adịghị ya, ebe ọ bụ na anwalela m kọmputa nwere draịva SSD, ana m akwado iji kọmputa nwere draịva ndị a. Nke arụmọrụ dị iche bụ nke ukwuuYa mere, ozugbo e meriri ihe mgbochi nke uche nke ọnụ ahịa kachasị elu, ekwenyere m na anyị ga-enweta arụmọrụ, nakwa na ahụike ụfọdụ.
Na mbụ, kaadị eserese nke laptọọpụ ka mmemme ọ nwere ike ịbụ onye ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị na-aga ide ederede doro anya na ngwa ngwa nke ụdị a, ọ ga-ezuru anyị inwe kaadị na-enye anyị ohere ịhụ ihe anyị na-ede, ya bụ, ihe niile dị na ahịa. Ma, dị ka anyị kwuru ọtụtụ ugboro n'isiokwu a, ide ihe bụ akụkụ dị mkpa, ma ọ bụghị naanị otu. Ịhọrọ eserese dị ike karịa ma ọ bụ nke na-adịchaghị ike ga-adabere n'ihe anyị na-eji ihe a na-eme, ya bụ, ọ bụrụ na anyị ga-eme mmemme iji mepụta egwuregwu vidiyo, anyị ga-achọ eserese dị mma iji nwee ike ịhụchalụ ọdịnaya niile. Ọ bụrụ na anyị achọghị ihe ọ bụla pụrụ iche, anyị nwere ike ichefu nkọwapụta a.
Enweghị nsogbu mgbe ị na-arụ ọrụ dị ezigbo mkpa. Ọ dịghị onye nwere mmasị ịnọ n'etiti ọrụ wee hụ ozi na ihe anaghị azaghachi ma ọ bụ mechie na mberede. Iji zere nke a, anyị nwere ike iburu n'uche ọtụtụ akụkụ, dị ka ịzụrụ kọmpụta nwere ihe ndị dị elu (RAM, CPU na diski diski), kamakwa ịhọrọ sistemụ arụmọrụ nke kwụsiri ike na mmiri.
Onwe m, a ga m akwado iji kọmpụta nwere a Linux dabeere sistemụ, n'ime nke anyị nwere ọtụtụ ndị nwere eserese eserese nke emebere ka ọ kwụsie ike na mmiri. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-eche na ha adabaghị nke ọma ma ọ bụ sistemụ siri ike, nhọrọ nke abụọ m ga-abụ macOS. Dị ka ị nwere ike iche, abụghị m nnukwu onye na-akwado Windows, usoro nke m ga-akwado ma ọ bụrụ na kọmputa nwere ihe ndị dị ike ma ọ bụrụ na ngwanrọ anyị ga-eji dị naanị maka sistemụ Microsoft.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ịba uru » Enwere ike ibugharị maka mmemme